Buy Mi dots in ဗို္လ္တေထာင္ (19,000 Ks) on ipivi
#လူကြိုက်များတဲ့ mi earbuds လေးတွေပစ္စည်းပြန်ရောက်ပါပြီ...#ရောက်ကုန်နားကျပ်လေးမို့လက်မနေှးဖို့တော့အကြံပေးချင်လို 😘😘😘
ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ Review ကိုတော့ အောက်မှာ ရှိုးကြည့်လိုက်တော့နော်👇👇
Dimensions အနေနဲ့26.65×16.4×21.6mm ထုထည်အရွယ်အစားကရှိပြီးတော့ Earphone case နဲ့ Charging case ကိုတော့ ကြာရှည်ခံတဲ့ Plastic ကိုယ်ထည်အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပေးပါတယ်...
ဒါ့အပြင် နားထဲတပ်ဆင်တဲ့ အချိန်မှာ နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့အတွက် Silicone materials အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပေးတာကြောင့် တပ်ဆင်ထားတဲ့အချိန်မှာ ပေါ့ပါးပြီး အလွယ်တကူပြုတ်ကျမှာလည်း စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ ပါဘူးနော်...
Connection ပိုင်းမှာတော့ မည်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားနဲ့ မဆိုအလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးတော့ Charging box လေးထဲကနေ ထုတ်လိုက်တာနဲ့ Pairing mode အနေအထားကို ရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်...Bluetooth version 5.0 အသုံးပြုထားပြီး 10 meters အကွာအဝေး အထိ အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်..
ဒါ့အပြင် Earphone အတွင်းမှာ အသုံးပြုထားပေးတဲ့ DSP Chip ဟာဆိုရင် ဆူညံသံတွေကိုအများကြးီလျော့ချပေးတာကြောင့် သီချးင်နားထောင်တဲ့ အချိန်တွေနဲ့ ဖုန်းပြောတဲ့ အချိန်တွေမှာ အသံတွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနားဆင်နိုင်မှာပါ....
Battery အနေနဲ့ကတော့ 🔋🔋
Charging box မှာ တော့ 300 mAh Battery တပ်ဆင်အသုံးပြုထားပြီး Headphone မှာတော့ li-iron Battery အမျိုးအစားကို 40 mAh အသုံးပြုထားပေးပါတယ် ....Charging time ကတော့2hours ဖြစ်ပြီး Charging box နဲ့ ဆိုရင် Stand by 12 နာရီ အထိ အသုံးပြုနိုငိပြးီ Music time အတွက်ကို4နာရီ ကြာအောင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
အသံပိုင်းကတော့ Budget series တစ်ခုအနေနဲ့ ထွက်ရှိလာတယ်လို့ မထင်ရအောင် နားထောင်လို့တော်တော်အဆင်ပြေတာကို တွေ့ရတာမို့ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှူဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာ..
နယ်မှ မှာယူချင်တဲ့ Customer များအနေနဲ့
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အိမ်အရောက်ပို့ပေးပြီး မြို့နယ်အလိုက် ပို့ဆောင်ခပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
🚛 ပို့ပေးရလျှင် မည်သည့်နေရာမဆို ပို့ခပေးရပါမည်၊၊
နယ်ပို့ပေးရလျှင် ပို့ခ+တန်ဆာခ ရှင်းပေးရပါမည်။
📬 Moe YgnFacebook Chat Box
(ပေ့ခ်ျ ထိပ်တွင်ရှိသော Message ဆိုတာကိုနှိပ်၍) (သို့)
⚺ Viber (09752415915)
နယ်မှမှာယူသူများအနေဖြင့် ငွေလွှဲအဝင်သာပြပေးယုံနှင့် သက်ဆိုင်ရာနယ်သွားမည့် မန္တလေးမြို့ရှိ ကားဂိတ်(သို့)စာတိုက် များသို့ ပို့ပေးပါသည်၊၊
ဆိုင်ခွဲမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ၊​Yangonကနေ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ပို့ပေးပါတယ်၊၊
နယ်မှဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်းအတိအကျ ဖော်ပြပေးထား သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊၊ ပစ္စည်းရောက်ဖို့ အာမခံပါတယ်၊၊
ကျွန်တော်တို့ Moe Ygn မှ ပစ္စည်းများသည် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် သေချာစမ်းသပ်ပြီးအဆင်ပြေမှ ရောင်းပေးတာဖြစ်လို့ ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊၊
အားပေးကြသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ အကယ်၍အဆင်မပြေမှုများရှိရင် ကျွန်တော်တို့ Moe Ygn Facebookမှာပြောကြားနိုင်သလို
Ko Thi Ha Moe
နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှု: ၄ လ ခန့်က